Endrik'io pejy io tamin'ny 28 Novambra 2019 à 10:37
138 octets ajoutés , il y a 1 an
Endrik'io pejy io tamin'ny 14 Novambra 2019 à 16:47 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 28 Novambra 2019 à 10:37 (hanova) (esory)
Ny [[Baiboly protestanta amin'ny teny malagasy|'''Baiboly''' '''protestanta''' '''amin'ny''' '''teny''' '''malagasy''']] dia dikan-tenin'ny [[Baiboly]] amin'ny [[Fiteny malagasy|teny malagasy]] ampiasain'ny fiangonana protestanta miteny malagasy amin'ny fotoam-pivavahana. Ny edisiona tamin'ny taona 1909 izay nasiam-panitsiana madinika tamin'ny taona 1965 no ampiasaina amin'izao. Io Baiboly io no ampiasain'ireo Fiangonana protestanta toy ny [[Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara|Fiangonan'i Jesoa Krisy eto Madagasikara]], ny [[Fiangonana Loterana Malagasy]], ny [[Eklesia Episkopaly Malagasy]] sns. sy ireo [[Evanjelisma|Fiangonana evanjelika]] sy [[Pentekotisma|pentekotista]] maro manerana an'i Madagasikara. Mitondra ny anarana hoe '''''Ny Baiboly''''' ny Baiboly protestanta amin'ny teny malagasy.
== TantaraTantaran'ny Baiboly protestanta malagasy ==
Mampiasa ny Baiboly protestanta ny fiangonana protestanta rehetra eto Madagasikara. Ny [[protestantisma]] dia tonga teto Madagasikara tamin'ny vanim-potoana faha mpanjaka. Misy fiangonana maro ka ny roa voalohany tonga teto Madagasikara dia ny [[loteranisma]] sy ny [[kalvinisma]] (na presbiterianisma) izay nipoiran’ny [[Fiangonana Loterana Malagasy]] (FLM) sy ny [[Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara]] (FJKM). Tsy ireo ihany no fiangonana protestanta fa ao koa ny [[Misiona Evanjelika Teratany eto Madagasikara]] (METM), ny [[Fiangonana Malagasy Tranozozoro Antranobiriky]] (FMTA), ny [[Fiangonana Protestanta Vaovao eto Madagasikara]] (FPVM), ny [[Eklesia Episkopaly Malagasy|Eklesia Episkopaly Malagasy (Anglikana)]] (EEM).
==== Ny Adventista sy ny Evanjelika sns ====
Mampiasa ny Baiboly protestanta ny [[Fiangonana Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito eto Madagasikara|Fiangonana Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito]], ny [[Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara]], ny [[Fiangonana Pentekotista Mitambatra (Madagasikara)|Fiangonana Pentekotista Mitambatra]], ny Assemblée de Dieu (Fiangonan'Andriamanitra) sy ny [[Pentekotisma|fiangonana pentekotista]] sy [[Evanjelisma|evanjelika]] (na ara-Pilazantsara) maro samihafa miparitaka eto Madagasikara, raha mbola tsy manana dikan-tenin'ny Baiboly azy manokana. Ny Baiboly protestanta no nampiasain'ny [[Vavolombelon'i Jehovah eto Madagasikara|Vavolombelon'i Jehovah]] eto Madagasikara talohan'ny namoahany ny [[Ny Soratra Masina - Fandikan-Tenin'ny Tontolo Vaovao|dikan-teniny]] manokana.
== Fanitsiana ny Baiboly protestanta ==
Efa tonga amin'ny fanitsiana fahenina ny Baiboly protestanta. Ity fanitsiana ity dia miavaka amin'ireo natao teo alôhaaloha noho ny nanoloana ny teny hoe ''[[Jehovah]]'' amin'ny hoe ''TOMPO''. Tsy nankasitrahan' ny mpino protestanta maro izany Baiboly vaovao izany noho io fanesorana ny anaran' Andriamanitra io.▼
▲Efa tonga amin'ny fanitsiana fahenina ny Baiboly protestanta. Ity fanitsiana ity dia miavaka amin'ireo natao teo alôha noho ny nanoloana ny teny hoe ''[[Jehovah]]'' amin'ny hoe ''TOMPO''. Tsy nankasitrahan' ny mpino protestanta maro izany Baiboly vaovao izany noho io fanesorana ny anaran' Andriamanitra io.
* [[Baiboly amin'ny teny malagasy]]
*[[Baiboly katolika amin'ny teny malagasy]]
*[[Baiboly Dikanteny Iombonana Eto Madagasikara]]
* [[Protestantisma eto Madagasikara]]
* [[Kristianisma ao Madagasikara|Kristianisma eto Madagasikara]]
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/977796"